Nhau - Indonesia International Kurongedza Exhibition
Chese chiito cheHongbang chizere nekukohwa. Pamusangano wepasi rose muIndonesia, Hongbang akabudazve. Kwaive kubudirira kwakazara uye kwakabvunzurudzwa pane yemuno TV show. In ichi kuratidza, isu kamwe zvakare kuratidza mweya Hongbang - kubatana, zvakanaka, zvakaoma kurwa. Nguva dzese mukutaurirana nevatengi dzinogona kuzivikanwa nevatengi. Rwendo rwese rwunoratidza hongbang maitiro.
Iri ndiro redu rakanaka, rinokudzwa, rinoshanda nesimba.
Kutanga, iva akasimba mune ako mazano uye zvaunotenda. Rutendo isimba rinotyaira rese basa, ndiyo nzira, ndicho chiratidzo. Chete kana isu tine gwara rakajeka ndipo patinogona kushanda nemazvo.
Kechipiri, isu tinofanirwa kudzidza nesimba uye nekuvandudza hunhu hwedu nguva dzose. Tinofanira kushongedzera pfungwa dzedu nedzidziso dzesainzi, kunyatsonzwisisa mafambiro ebudiriro, kusimbisa maonero epasirese, maonero ehupenyu netsika, uye kukudziridza tsika yekudzidza kweupenyu hwese. Tinofanira kugara tichimisikidza mazano matsva, kudzidza ruzivo rutsva uye kugona hunyanzvi hutsva, kuti tipe njere nehungwaru kukudziridza nekukura kweHongbang.
Yetatu, senhengo yeHongbang kurongedza, tinofanira kufambira mberi uye kuve neushingi hwekuvandudza. Nguva dzese hongbang anovandudza, inofanirwa kuteedzera kune anopayona uye ekuvandudza mazano ebasa, kunyatsobatanidza izvo zvinodiwa nevatungamiriri uye hunhu hweThe Times neicho chaicho, uye kuita basa zvine hungwaru. Tinofanira kunge takazara nesimba uye nesimba. Sevatsva simba uye makomandamu eHongbang, tinofanirwa kushanda nechido uye tigare tichifara.
Ma comrades, ngatishandei pamwechete, tidurure ruva reyakanaka nedikita, kuruka muraraungu wechakanaka nemaoko maviri, kuunganidza simba revanhu vese, kubatana semunhu mumwe, shanda nesimba, uye nyora chitsauko chakaisvonaka munhoroondo huru ye Zvakaitwa naHongbang mukuvandudza!